Heestaan Bar-Bar Maxay Tahay Suugaan Ahaan? – Xeernews24
Heestaan Bar-Bar Maxay Tahay Suugaan Ahaan?
20. Januar 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Heestan oo uu Curiyey Abwaan la yidhaahdo Mawliid Xasan Curjin, waxay labba ku noqon doontaa Habdhac ugub ku ah suugaanta iyo heesaha Soomaaliyeed.
Waa’ Cusub ayaa u beryey ,Heer Dunidu inala dhegaysato ayayna usii gudbayaan Heesaha Soomaaliyeed.
Waxay gaadhay xiligii qofka afkeena fahmaya iyo midka aan kalmad ka fahmayniba ay inala dhagaystaan heesaheena.
Maaha tii ugu horaysay ee nooceedan ah, Heesta “Barbar” dadka qaar waxay u arkaan macno ahaan iyo suugaan ahaanba heesaan aan waxba ku jilanayn amma xambaarsanayn ammaba aan wax qiimo ah ku fadhiyin, iyadoo haddana labba todobaad oo keliya ay ka daawadeen barta youtube oo keliya ah kudhawaad 2milyan oo qof.
Dadka Afafka aqoonta fog u leh iyo xeeldheerayaasha ku talax tegay Suugaanta Afkeena hooyo, waxay qiraal ka yihiin oo haatanba dareensan yihiin Waaga Cusub ee u beryey Suugaanta Soomaalida.
Suugaanta Soomaalida inta badan waxay dhammaantood qiraal ka yihiin keliya Tix iyo Tiraab oo ah inta aragtidooda iyo aqoontoodu u kala qaybiso Afkeenan hodonka ah, taasi darteed habdhaca heestani waa midd ka baxsan intii ay isla yaqaaneen lana qaab ah habdhac ahaan sidda Tiraab-tixeedda Carbeed oo ku dhammaada hal xaraf oo isku cayn ah.
Hal hees ayaa ka horaysay noocan oo loo yaqaano Tiraab-tixeed taasi oo ah heestii soo baxday dabayaaqadii sannadkii 2016 heestaas oo uu ereyadeeda curiyey Cabdirisaaq Bulqaas ayna ku luuqayso fanaanada deeqa afro, ereyadeedana ay kamid yihiin:
“Saaxiib anigaa ku jecel sax,
dartaa caashaqa la ahay kax,
haddaad i tidhaah mar uun bax.
jidhkaba dhidid baa ka odhan fax.”
Heestanina waxay noqonaysaa heestii labbaad ee ku soo biirta suugaanteena nooceedana loo yaqaana Tiraab-tixeed oo la jaal ah islaha heesaha Carbeed ayaa waxaa iyadana curiyey Abwaan Mawliid Xasan Curjin, waxaana ku luuqaynaya fanaanka Oomaar.
Jacayl ku xiiray sarsar
Tiraab-tixeedda lagu soo ballaysimay heeska “Saaxiib Sax” waxaa laga soo dheegtay ama ay ku fadhidaa qaab-dhiska tixda Carbeed oo weydaarsan tixdii Somaalida. “Tax, shax, ax, amma Qur, Sar, Bar.
Tiraab-tixeeddan oo hadda innagu cusub, waxaa dunida laga yaqaanay tan iyo qarnigii 15aad.
Way jiraan inay dunidu ku kala dambaysay ka taabaqaadkeedu, tusaale ahaan Dalka Japan waxaa ay ka taabba-gashay qarnigii 17aad.
Arlada Reer Galbeedka, iyagana, tiraab-tixeeddu, waxaa ay ka tisqaaday bilowgii qarnigii 19aad. Waxaana mayalka u hayay dalalka France iyo Germany.
Dunida Carabtana, waxaa la sheegay gabyaagii iyo qoraagii reer Syria, Francis Marrash (1836–1873) inuu ahaa qofkiii ugu horreeyay ee curiyay tiraab-tixeed Carabi ah.
Balse, maansada tiraab-tixeeddu waxaa ay laba kaclaysay sannadahii 1950-1960 ka dib markii ay si xoog leh u soo shaac-bixiyeen sugaanyahannada Maraykan.
Ugu Dambayn waxaa Boggaadin inaga mudan Hal-abuuradii kala curiyey labbada heesood, gaar ahaan ninkii balaysimay oo ah Cabdirisaaq Bulqaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0203.jpg 1094 1089 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-20 11:56:552018-01-20 11:56:55Heestaan Bar-Bar Maxay Tahay Suugaan Ahaan?
Abdi Iley ama faaliye u tag amma Beelaha Gabooye Guur ku Waal waqtigii lagu... Maamulka Somaliland Oo Amray Dagaal Deg Deg ah Tukaraq, Jawab Kululna u Diray...